HORDHAC: Chelsea v Vidi FC – Gool FM
( Europe League ) 04 Okt 2018. Kooxda Chelsea ayaa marti qaadi doonta dhigeeda MOL Vidi kulankooda labaad ee heer-ka group-yada koobka Europe League.
Blues ayaa boqolkiiba boqol si wanaagsan ugu bilaabatay dhammaan kulamada ay cayaartay tartamada oo dhan welina lama kulmin guuldarro.
Garsooraha: Miroslav Zelinka ( Czech Republic )
Laacibka qadka dhexe Chelsea Ruben Loftus-Cheek ayaa laga yabaa in loo gacan galiyo bilaawga shaxda kowaad ee kulanka kooxda heysata horyaalka Hungari ee Vidi koobka Europa League.
Loftus-Cheek, oo 22jira, ayaa saftay laba kulan uu badal ahaa kooxda Chelsea cayaaraha horyaalka Premier League xagaagan.
“laga yabaa birto iney tahay waqtigii la arki lahaa Loftus-Cheek,” ayuu yiri leyliyaha Chelsea Maurizio Sarri.
Pedro ayaa sido kale laga yabaa inuu kusoo laabto shaxda kowaad kaddib markii uu kasoo kabtay dhaawac garabka ah.
Tani waa kulankii ugu horreeyay oo Chelsea ay la cayaareyso MOL Vidi iyo markoodii ugu horreysay oo ay wajahaan kooxda Hungari ka dhisan taariikhda.
MOL Vidi kulankii u dambeeyay oo ay wajahday koox England ah waxay aheyd bishii March 1985 wareega siddeeda koobka Uefa Cup oo ay la dheeshay Manchester United – kaddib cayaar ku dhamaatay 1-1, balse kooxda Hungarians ayaa kusoo baxday rigoorayaal.
Chelsea marnaba ma qasaarin kulan gurigooda oo tartamada yurub ah oo aysan ku jirin kulamada isreeb-reebka oo aan aheyn tartanka Champions League ( 35 kulan ayay ku dheeleen, 28 guul, 7 barbaro, ).
MOL Vidi ayaa guul gaarin mid kasta oo kamida lixdii dheel ee lasoo dhaafay kulamada banaanka koobka Uefa Cup ama Europa League, kulan barbaro ayay galeen iyagoo shan kulanna la garaacay tan iyo guul 1-0 oo ay kaga badiyeen Real Madrid lugta labaad ee Uefa Cup final xagaagii 1984-85.
Weeraryahanka Chelsea Alvaro Morata ayaa sameyay todoba shuud kulankii kowaad ee group-ya, tasoo uu kaga badan yahay cayaariyahan walba – Inkastoo midna uusan ku aadin goolka.
“Champions League waa tartanka ay ugu jecel yihiin dhamaan kooxaha”….Messi